Waa maxay sababta loo yaqaan Microstation V8i - Geofumadas
Nofeembar, 2008 tabo cusub, Microstation-Bentley
Maanta, sida aan ku dhawaaqnay, Bentley wuxuu soo saaray joornaalka 8i ee waxtarka guud ee wax soo saarka, a bogga hore ujeedadaas, oo leh fiidiyoow iyo fikradaha dadka isticmaala kala duwan. Inkasta oo dhowr jeer xiriirka saxaafadeed ee ay soo direen ay leeyihiin cinwaan khalad ah oo ftp ah.
Waxaan soo xusuustaa version 2001 AutoCAD la odhan jiray 2000i ma xasuusto sababta, waxaan qabaa maxaa yeelay waxay ahayd "siman" in 2000 ah, Microstation V7 j waxaa loo yaqaan marka la fuliyo horumarinta Java ... in V8 tagay by .net si gudahood ah qof kasta oo sannadka ka hadli doonaa V8i, xaqiiqada. Ka hor inta aan isku dayo inaan "qiiq" ee macnaha i of, ku salaysan advertising maanta na siisay ka dib markii shirka dalwaddii, aad u fiican laakiin for "NOLA" xira qaybaha kuwaas oo noqday mid aad u gaabis ah.
Isdhexgalka u muuqataa in erayga qeexaya aqoonsiga shirkadaha piggybacking version this, inkasta oo la filayo in muddo ah, waxaa la fahamsan yahay by naqshadeynta ah oo sameeyey dhammaan codsiyada hooyo iyo helay ka yar hal naqshadaha ah. Inkasta oo aan la filayaa in ay ka soo fikradda yimaadaan "Xeelad"Inkasta oo in dhowr ka mid ah waraaqaha uu si daahsoon u hadlid, Uma maleynayo ayaa laga fuliyay dhammaan heerarka kala duwan, sida ay u muuqataa in ay la AutoDesk dhici milicsiga wanaagsan oo Txus ee guurka ka CAD in BIM.
Laakiin waa inaan muujiyaa, waa la sii daayo qarsoodi aad u badan oo ku salaysan rajada sare, markaa waxay bilaabeen a qadar xadidan nuqullada rajada ah ee helitaanka ra'yiga, haddii aan nasiib helo waxaan heli doonaa hal, haddii aanan ... Waxaan sugi doonaa iyaga inay ii sheegaan.
Naqshad caadi ah oo ku salaysan Maqnaanshaha:
Naqshadeynta iyo aragtida ayaa sii kordhay hal talaabo, taasi waxay ka dhigan tahay in waqtiga dhabta ah uu ka yimaado dhismaha ugu horeeya dhismaha dhismaha ee leh Components Generative, dhismaha dhabta ah si loo xakameeyo kormeerka iyo farsamada.
Is dhexgalka, Muuqaalada Dhaqanka:
"Bandhigyada Qodobka" ayaa sii faafaya, sida 2D joojiso inay jirato ama ugu yaraan isku xidhaan 3D ... ???
Maaha mid cad, laakiin waxay u muuqataa inay raadinayaan siyaabaha loo adeegsado 2D.
Waxaa la fahamsan yahay in hadda, dhammaan qalabka Bentley taageero iyo la soo bandhigi karaa hal nidaam tixraac on Daqsi, iyadoo aan loo eegin codsiga dibadda in imanayay oo ... waxaa la fahamsan yahay in ka yar caadiga ah Nice halkaas?
Waxay u muuqataa sida Hulk cagaaran, laakiin kanu waa waxa ay isticmaalaan: "waxaan helnay faylka 20 mb waxaanay maareynay 55 jeer dhakhso". Waa inaanu aragnay haddii tani ay ka baxsan tahay maareynta xogta LAN iyo WAN, halkaas oo ay ku yeesheen xooggan SharePoint iyo Project Wise.
Inkasta oo aanu ku qanacsannahay, tani ma ahan mid cusub, halkii deyn ah sababtoo ah waxaan fahamsanahay isdhexgalka maaha oo kaliya maadaama ay akhriso qaababka xaafadaha laakiin sababtoo ah waxay taageertaa heerarka. Hadda waxay sheeganayaan inay diyaar u yihiin: LandXML, OGC, ISO 15925, WML, IFC ... ama ugu yaraan sidaas darteed waxay u muuqataa in ay sheegayso warqad cad oo xajmi ah oo 21 ah.
Labada hab ee aynu jecelnahay in aan ogaano in ay jirto Innovation, oo sii wado V8, oo ixtiraamaya jaangooyooyinka oo la wadaagaan si kuwa tartanka ah ay u badbaadin karaan lacagta kharashka "import / eXport" fudud. Waxa kale oo ay u muuqataa fikrad aad u wanaagsan, ka dib markii ku dhawaad ​​saddex sano oo iibsigii ah, ma aha in ay software yaryar laakiin dib-u-kobcinta iyada oo dhismaha isku mid ah.
Hadda waxay u muuqataa in la arko sida ay u difaacayaan oo ay u suuq geeyaan.
Post Previous«Previous Xirfadaha heerarka leh Google Earth - Contouringge ama AutoCAD
Post Next Earth Virtual wuxuu sawirada ka soo dejiyaa SpainNext »